မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်ကို ဩဂုတ်လ ၉ ရက် တနင်္လာနေ့ညနေက ရောက်ရှိသွားတဲ့ ဆင်ဖြူကို စစ်အစိုးရက ဘဒ္ဒဝတီ ဆင်ဖြူတော်လို့ အမည်ပေးပြီး မင်းခမ်းမင်းနားနဲ့ ကြိုဆိုခဲ့ရုံသာမက ငွေကျပ်သိန်းပေါင်းများစွာ အကုန်ခံကာ နားနေဆောင်နဲ့ ရေကန်ဆောင်တွေ ဆောက်လုပ်နေတယ်လို့ ပျဉ်းမနားဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်တွင် ဖမ်းဆီးမိခဲ့သော ဆင်ဖြူဟု ဆိုသည့် ဆင်ကို အောက်ရှိ မူရင်း ဓာတ်ပုံတွင် ကြိုးများဖြင့် တုပ်ဆိုင်းထားသော်လည်း စစ်အစိုးရ၏ သတင်းမီဒီယာများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းဖြင့် ပြုပြင်ပြီး ကြိုးများ ဖျောက်ထားသော အပေါ်ပုံကို ဖော်ပြပါသည်။ (Photo: AFP)
ဆင်ဖြူတော် ထားရှိမဲ့ အဆောင်ကို ရွှေတိဂုံစေတီပုံစံတူ တည်ထားတဲ့ ဥပ္ပာတသန္တိစေတီကြီး အရှေ့ဘက်မှာ ရှေးမြန်မာမင်းတွေရဲ့ ဆင်ဖြူတော်ထားရှိတဲ့ ပုံစံအတိုင်း ဆောက်လုပ်နေပြီး ဆင်ဖြူတော် ရေချိုုးခန်း၊ ရေပန်း၊ ကြံစိုက်ခင်း၊ ဆေးကုသဆောင်နဲ့ မြက်သိုလှောင်ရုံတွေလည်း ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်၊
မျက်မြင်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရ ဆင်ဖြူတော်ဟာ အဖြူရောင်မဟုတ်ပဲ မီးခိုးရောင်ဖျော့ဖျော့ ဆင်ဖြစ်ကာ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လက ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်းတောမြို့နယ်မှာ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗေဒင်ကိန်းခန်းအလိုအရ စစ်အစိုးရအတွက် ကံကောင်းတဲ့ နိမိတ်လို့ ယူဆထားတဲ့ ဒီဆင်ဖြူတော်ကို
ဖမ်းမိတဲ့အချိန်က စပြီး ပျဉ်းမနားကို ခေါ်ဆောင်လာတဲ့အထိ ငွေသိန်းရာချီ အကုန်အကျခံခဲ့တယ်လို့ ကြိုဆိုရေးအဖွဲ့ဝင်တွေထံက သိရပါတယ်။
ဝြန်ကီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်လက်ထက်ကလည်း ဆင်ဖြူနှစ်ကောင်ကို ဖမ်းဆီးပြီး ရန်ကုန်အင်းစိန် မင်းဓမ္မကုန်းမှာ ငွေကုန်ကျခံပြီး အဆောင်တွေ ဆောက်ကာထားခဲ့ပေမဲ့ ယခုအချိန်မှာတော့ ကြည့်ရှုသူ မဲ့နေပါတယ်။
I think the government no brain,mad and stupid.
Why they didn't use this money for develop our country.
We must condemn the government.
အလုပ္မရွိ အကိုင္မရွိ မီးခိုးေရာင္ဆင္တေကာင္အတြက္ကို က်ပ္သိန္းရာခ်ီသံုးတဲ့ေနာက္ေတာ့ ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ တပ္စုေငြေျပာက္တာ မထူးဆန္းပါဘူး။
Aug 13, 2010 09:44 AM